Cayaaryahanka ugu horeeya ee uu doonayo Jose Mourinho oo la ogaadey? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cayaaryahanka ugu horeeya ee uu doonayo Jose Mourinho oo la ogaadey?
(26-11-2018) Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa u muuqda mid la dhacsan bandhigyada weeraryahanka kooxda West Ham United ee Marco Arnautovic kaas oo uu u arko xiddiga uu ka dhiganayo saxeexiisa ugu horreeya ee suuqa.
Jose iyo Arnautovic ayaa ah kuwo aan isku cusbayn waxaana xusid mudan in ay kasoo wada shaqeeyeen kooxda ree Talyaani ee Inter Milan wakhtigii uu Special One kusoo qaatay horyaalka Serie A.
Wargeyska caanka ka ah dalka England ee Mirror oo shaacinayay warkan ayaa tilmaamay in Mourinho uu haatan diyaarinayo dalabkii uu ula tagi lahaa West Ham oo lagu sheegay aduun dhan 50 Milyan oo euros.
Jose ayaa suuqii xagaaga oo mid madaw ku ahaa kooxdiisa hore u doonayay 30 jirkan balse gabi ahaanba wuu ku fashilmay wakhtigaas inuu kasoo wado magaalada London.
Arnautovic ayaan waxba u qarin kooxdiisa West Ham waxaana uu si cadaan ah saxaafada ugu sheegay inuu doonayo inuu iskaga tago kooxda suuqyada soo socda waana ware u fiican dhagaha tababaraha ree Portugal.
Si kastaba ha ahaatee, Haddiiba uu Mourinho saxeexiisa ugu horreeya ka dhigto weeraryahanka ree Austria waxa la filayaa inuu xal uga noqdo weerar xumada kooxdiisa haysata kaddib hoos u dhaca Romelu Lukaku.